DEG DEG: Baaritaankii dacwadda ee Wallström oo hoos loo dhigay - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
DEG DEG: Baaritaankii dacwadda ee Wallström oo hoos loo dhigay
La daabacay tisdag 24 maj 2016 kl 09.57
Wallström oo baaristii lagu waday hoos loo dhigay
وزيرة الخارجية السويدية مارغوت فالستروم. sawir: Marcus Ericsson/TT
Qoraal saxaafadeed ka soo baxay madaxa xeer-ilaaliyaha ee laanta ka hor tagga musuq-maasuqa ayaa lagu sheegay in hoos loo dhigay dacwaddii tuhunka ee ku socotay wasiirka arrimmaha dibadda Sweden Margot Wallström.
Tuhunkan baaritaanka ayaa la xiriiray iyada oo uu ururka shaqaalaha ee Kommunal uu siiyay guryihiisa mid ka mid ah ee ku yaala bartamaha magaalada Stockholm kiradiisuna aad u hooseeyso, wasiiradda arrimmaha dibadda ee Sweden Margot Wallström, middaasina oo uu galey tuhun in gacmaha la is dhaafsadey. Hoos u dhigista tuhunkan dacwadda ayuu go’aan ku gaaray madaxa xeer-ilaaliyaha laanta ka hor-tagga laaluushka iyo musuq-maasuqa Alaf Johansson.
- Isu geeyn iima aanay suurtagelin caddeeynta inay jirtay xiriir saamayn ee ka dhexeeya shaqada, middaasina oo macnaheedu tahay in wasiiradda guriga loo siiyey iyada oo loo eegeyo darajada ay hayso, sida uu sheegay Alf Johansson.
Faallo qoraal ah oo Wallström u soo gudbisay hayadda wararka Sweden ee TT ayay wasiiraddu ku sheegtay: "Way i soo gaartay akhbaarta in tuhunkii dacwadda hoos loo dhigay. Waana tallaabo wanaag-san in laga gool gaaray. Iminkana waxaan xoogga isugu geeyn doonaa howlaha aan u xil-saarnahay".